Debian Wheezy ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ Linux မှ
Debian Wheezy ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ
ချစ်တယ် | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
ဒီနေ့သင့်ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာပြမယ် debian wheezy နှင့် KDE ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကကြိုက်နှစ်သက်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တပ်ဆင်ပြီးနောက်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
Debian Wheezy ၏ DVD ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ။
ဒီဗီဒီဗားရှင်းကိုဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်သည်။ အင်တာနက်မှအများနှင့်မတူအောင်များပြားလှစွာသော packet များသို့မဟုတ်ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းများကို download လုပ်ရန်မလိုပါ။
ဒါတောင်မှမတူညီတဲ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွေနဲ့စီဒီဗားရှင်းတွေကိုလည်းငါထားခဲ့တယ်။
Netinstall CD ကို
၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ CD (သို့) ဒီဗီဒီတွင်ကူးယူပြီးပြန်လည် reboot လုပ်သည်။ အဖြစ်မကြာမီသူတို့ restart အဖြစ်, ၏ installation menu ကို debian ဒီလိုမျိုး:
ငါကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် DVD ဗားရှင်းကိုကူးယူပြီးပြီဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်ရန်နှင့် tab ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖွင့်မည့်ရွေးစရာများပေါ်လာပြီး၎င်းကိုပေါ်လာမည့်လိုင်း၏အဆုံးသို့ထည့်ရန်လိုသည်။ ။ : desktop = kde ကိုနှိပ်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်သည်။ သင်၏ Debian တွင်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ သူတို့ကသာပြောင်းလဲလိမ့်မယ် kde အားဖြင့် xfce၊ ဥပမာ lxde ။ desktop = xfce...
သိသာထင်ရှားသည်မှာသင်သည် Gnome ကိုအသုံးပြုလိုပါက၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီး CD ဗားရှင်းကိုကူးယူထားသူများအနေဖြင့်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်ရန်မလိုတော့ဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည် CD အမျိုးအစားတစ်ခုကိုကူးယူပြီးပြီဆိုပါကရွေးချယ်ထားသည့်ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်၎င်း၏အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်းသင်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
Install ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး KDE သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Debian Wheezy တွင်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
system ကို install လုပ်ပြီး session စတင်ပြီးသည်နှင့် repositories ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ကိုဖွင့်ပြီးရေးသည် -
su nano password /etc/apt/sources.list ကိုရိုက်ထည့်ပါ
terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် sources.list ဖိုင်၏အကြောင်းအရာကိုပြပြီး၎င်းကိုထွက်ခွာပြီးပြုပြင်နိုင်သည်
deb http://ftp.debian.org/debian wheezy အဓိကပံ့ပိုးမှုအခမဲ့မဟုတ်သော deb-src http://ftp.debian.org/debian wheezy အဓိကပံ့ပိုးမှုကင်းလွတ် deb http://ftp.debian.org/debian wheezy-updates အဓိကပံ့ပိုးမှု non-free deb-src http://ftp.debian.org/debian wheezy-updates အဓိကပံ့ပိုး non-deb deb http://security.debian.org/ wheezy / မွမ်းမံအဓိကပံ့ပိုးကူညီမှုမဟုတ်သော deb -src http://security.debian.org/ wheezy / မွမ်းမံမှုများအဓိကပံ့ပိုးမှုမွမ်းမံသည် # Debian multimedia deb http://www.deb-multimedia.org wheezy အဓိကမဟုတ်သော deb-src http: //www.deb -multimedia.org အဓိကမဟုတ်သော wheezy
ကျနော်တို့သော့ချက် CTRL + O နှင့်အတူသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် CTRL + X ကိုနှင့်အတူအနီးကပ်။
ကျနော်တို့ distro ၏ update ကိုအတူဆက်လက်:
ယခုတွင်ငါသည်အချို့သောအခြေခံ application များကို APPER program manager နှင့်ထည့်သွင်းလိုက်သည်
အဆိုပါ KDE menu ကိုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
aptitude install လုပ်ရန် icedtea-plugin flashplayer-mozilla kde-config-flash-player ကိုထည့်သွင်းပါ icedove icedove-l10n-my-es transmageddon kdenlive gufw kde-config-gtk-style gtk2-engines-oxygen gtk3-engines-oxygen gdebi-kde kde-config- touchpad rar unrar
ပြီးပြီ .. ဒီဟာကငါတို့ Debian Wheezy KDE ကိုအပြည့်အဝပြင်ဆင်ပြီးအလုပ်လုပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » Debian Wheezy ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ
141 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Wheezy နှင့် KDE (အနည်းငယ်ပိုသောအကြောင်းအရာများဖြင့်) ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင်ငါသည်ဤအမှုကိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့်အလုပ်မရခဲ့သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၀ င်းဒိုးများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နှင့် qt နှင့် gtk applications များ၏ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိရန် qtcurve ကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ bespin နှင့် xbar ကို compile လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်အတွက် build-essential, cmake, kde-workspace-dev, libxrender-de နှင့် libxext-dev packages များအပြင် သူတို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမပေးသောအခြားအခြေခံလိုအပ်ချက်များမှာ preload နှင့် prelink ဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ် modules များအသုံးပြုသူများအဘို့ DKMS ပျက်ကွက်မရနိုင်ပါ။
Ruffus သို့စာပြန်ပါ -
ငါ preload ကိုသုံးပေမယ့် prelink ကငါ့ကို run သောအခါငါအမြဲတမ်းအမှားတစ်ခုပေးခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. 🙂
KDE တွင် gtk applications များ၏ပေါင်းစည်းမှုကို kde-config-gtk-style gtk2-engines-oxygen gtk3-engines-oxygen oxygen packages များဖြင့်အောင်မြင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိရိယာများသည်အဆင့်မြင့် linux အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းတို့မည်သို့တပ်ဆင်သည်ကိုပြောစရာမလိုတော့။
ကျနော့်အမြင်အရ qtcurve ဖြင့်ရရှိသောပေါင်းစပ်မှုသည်အောက်စီဂျင်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ kde-look, deviantart နှင့်အလားတူဆိုဒ်များမှရာပေါင်းများစွာသော themes များကိုသင် download ဆွဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ဗဟုသုတရှိပါကသင့်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ KDE ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏အရသာသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိပဲအလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ကူးကိုကျွန်ုပ်မယူမှတ်ပါ။ ကံကောင်းထောက်မစွာကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ bespin ကိုတပ်ဆင်။ တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်မကြာသေးမီက Be :: Shell အသွင်အပြင်ဖြင့်ခေတ်စားလာပြီးအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုထောင့်ဖြင့်ပေါင်းစပ်။ ရရှိခဲ့သည်။
သူတို့ကခေါင်းစဉ်တစ်ခုမေးလာတယ်။ အခုငါ e4rat ကိုသုံးနေတယ်။ အစမြန်အောင်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သိပ်မတိုးတက်ဘူး။ preload နဲ့ prelink နဲ့ startup တိုးတက်မှုကိုမင်းသတိထားမိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Debian Wheezy မှာ loading time တွေပြproblemsနာမရှိပါဘူး။ system startup and applications မှာ loading speed ကိုယေဘုယျအားဖြင့်တိုးလာတာကိုသတိပြုပါ။ ယခုသင် Preload ကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်တင်ပို့ချိန် 50% တိုးလာနိုင်သည်။ ယုတ္တိနည်းအရသင်၏ system ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်မှုရှိမယ်ဆိုရင်၊ သင်ဟာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
အိုကေ၊ ငါစမ်းကြည့်မယ်။ တကယ်တော့ငါ Kubuntu ကိုသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Debian လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲခြားသိနိုင်ဖို့အတွက်ငါ Razor-qt လိုဂိုကိုယူဖို့လိုတယ်။
အစွန်အဖျားနှင့်ကောင်းသော post ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုငါ Debian ကိုလက်တော့ပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်၊ အခုဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါအမှားလုပ်မိပြီဆိုတာသတိထားမိတယ် - ငါ iso DVD ကို gnome နဲ့ကူးယူလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖျက်ရန်နှင့်အခြားထည့်သွင်းရန်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပထမဆုံး DVD ထဲတွင် KDE, GNOME, XFCE, LXDE environments စသည့်အသုံးအများဆုံး pack များပါရှိသည်။
အခြားပတ်ဝန်းကျင်များကိုထည့်သွင်းရန် boot screen တွင် "alternate desktop" ကိုရွေးချယ်ပါ။
အမှန်စင်စစ်၊ boot screen တွင်၊ post တွင်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်သို့မဟုတ်အထက်တွင် Nestor ပြောခဲ့သောအတိုင်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ 🙂
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း၊ ကျွန်တော်ဒီ Taringa ကိုမြင်ပြီး debian wheezy တည်ငြိမ်သော repos အတွက်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ဖြတ်ထားခဲ့တယ်။ အခုငါ configure လုပ်တော့မယ်။ မနေ့က Hehehe ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာတက္ကသိုလ်အလုပ်တွေရှိခဲ့တယ်၊ debian ကိုပျော်မွေ့ဖို့အချိန်မပေးခဲ့ဘူး။
တကယ်တော့ repositories နဲ့ link တွေကိုညွှန်ပြတာပိုကောင်းတယ်
အချိန်ကတည်းက debian သည် version 7.0.1 ကိုလွှတ်ပေးလိမ့်မည်။ link အားလုံးသည်အသုံးမပြုနိုင်ပေ
ကောင်းပြီရိုလို။ အခု about အကြောင်း🙂
ငါသိပ်နားမလည်ဘူးလို့ထင်ရတယ်။ ဆိုလိုတာကမင်းက x ex လို့ရိုက်နေတဲ့ iso images ရဲ့ repositories နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကိုဆိုလိုတာ။
ဥပမာအားဖြင့်ဗားရှင်း 7.0.1 သို့ wheezy ကို update လုပ်သည့်အခါအချိန်တိုအတွင်းသူတို့သည်အသုံးမပြုတော့ပါလိမ့်မည်
နှင့်ဤ post ၏အနာဂတ်စာဖတ်သူများ iso ပုံရိပ်တွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်းအားဖြင့်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုက်တာကတော့လက်ရှိတည်ငြိမ်ဆုံး version ကိုအမြဲညွှန်ပြတဲ့လက်ရှိ repositories ကိုညွှန်ပြတာကပိုကောင်းတယ်
ISO3ကိုဒေါင်းလုပ်ချသည်။ သို့သော် usb မှကျွန်ုပ် pc ပေါ်တွင် install လုပ်လိုသည်။ ubuntu ကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည် boot disk ဖန်တီးသူနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ kingston DTSE9 usb ပေါ်တွင် boot disk creator ဖြင့် mount ရန်ကြိုးစားသည်။ ငါ၏အ bios ၏ Boot တက်ပါက iso, usb, အ pc ဖြစ်လိမ့်မည် ??
ငါ Debian7ကို install လုပ်လိုက်ပေမယ့်ချက်ချင်းပဲ uninstall လုပ်လိုက်တယ်။ Wi-Fi နဲ့ Wi-Fi မပါတဲ့ Laptop ကိုဘယ်တော့မှချိတ်ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Ubuntu ရှိသင်၏ wifi ကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်အသုံးပြုသောတူညီသောအရာသည် Debian Wheezy repositories တွင်ရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။
သင် which မည်သည့်ကဒ်ပြားကို to သိရမည်နည်း
lspci command ။ သင်၏စက်၏အချက်အလက်ကိုပြသည်။
00: 02.0 VGA သဟဇာတဖြစ်သော Controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (Rev 02)
00: 1a.0 USB Controller: Intel Corporation5Series / 3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (တည်းဖြတ် 05)
00: 1b.0 အသံစက်ပစ္စည်း: Intel Corporation5Series / 3400 စီးရီး Chipset မြင့်မားသောအသံ (တည်းဖြတ် 05)
00: 1c.0 PCI bridge: Intel Corporation5Series / 3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (တည်းဖြတ် 05)
00: 1c.1 PCI bridge: Intel Corporation5Series / 3400 Series Chipset PCI Express Root Port2(တည်းဖြတ် 05)
00: 1d.0 USB Controller: Intel Corporation5Series / 3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (Rev 05)
00: 1e.0 PCI တံတား: Intel Corporation 82801 မိုဘိုင်း PCI တံတား (rev a5)
00: 1f.0 ISA တံတား: Intel Corporation Mobile5Series Chipset LPC Interface Controller (ပြင်ဆင်ချက် ၅)
00: 1f.2 SATA controller: Intel Corporation5Series / 3400 Series Chipset4port SATA AHCI Controller (Rev 05)
00: 1f.3 SMBus: Intel Corporation5Series / 3400 စီးရီး Chipset SMBus Controller (Rev 05)
00: 1f.6 အချက်ပြထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှု - Intel Corporation5Series / 3400 စီးရီး Chipset အပူပေးစနစ် (rev 05)
01: 00.0 Ethernet Controller: Broadcom ကော်ပိုရေးရှင်း NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe (တည်းဖြတ် 01)
02: 00.0 ကွန်ရက်ထိန်းချုပ်သူ: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b / g / n (တည်းဖြတ် 01)
ff: 00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture ယေဘူယျ Non-core Registers (Rev 02)
ff: 00.1 Host bridge: Intel Corporation ၏အဓိကပရိုဆက်ဆာ QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 02)
ff: 02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link0(တည်းဖြတ် 02)
ff: 02.1 Host bridge: Intel Corporation ၏အဓိကပရိုဆက်ဆာ QPI Physical0(တည်းဖြတ် 02)
ff: 02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor ကို Reserved (Rev 02)
ff: 02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor ကို Reserved (Rev 02)
Debian မှာ wifi ကိုဘယ်လို install ရမလဲ ????
ကောင်းပြီ၊ သင်ထည့်လိုက်သည့်အရာ၌သင်၏ system တွင် Broadcom BCM43225 802.11b / g / n wifi (တည်းဖြတ် 01) ရှိသည်။ Debian တွင်တပ်ဆင်ရန် driver မှာ broadcom-sta-dkms ဖြစ်သည်
ပြနာ sol sol
သင်ထည့်သွင်းရမည့် driver သည် firmware-brcm80211 ဖြစ်သည် http://wiki.debian.org/brcm80211 အခမဲ့မဟုတ်သော fimware များကိုသယ်ဆောင်လာသည့် intalor တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင်
၎င်းသည် 32-bit နှင့် 64-bit installation အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီး firmware-brcm80211 driver ကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်သည် debian ကိုရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါ။ debian installation လုပ်ငန်းစဉ်၌ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ကွန်ယက်အမျိုးအစား (ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ဝိုင်ဖိုင်) ကိုမသုံးခဲ့ပါကဤပြသနာကိုဖြေရှင်းရန်ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကွန်ယက်ကဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန် cable နှင့်နောက်ပိုင်း wifi ကိုသုံးနိုင်လျှင်
ထို့ကြောင့် Debian iso DVD: D ကိုကူးယူရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ဒီဗီဒီတွင်ဒရိုင်ဘာများ၊ စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများနှင့်ဘာသာစကားများအပြင်ကောင်းမွန်သောပရိုဂရမ်များရွေးချယ်ထားပါသည်။
သူတို့အား isos တစ်ခုကြိုးစားပါ ...
Petercheco ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ထည့် ၀ င်မှုတွေကအမြဲတမ်းကောင်းပါတယ်၊ ငါ Slackware ပန်ကာဖြစ်ပေမယ့်သူ့ကိုယ်သူလေးစားတဲ့ linuxero မှာ Debian DVD / CD ရှိရမယ်။
Mr. Linux ကိုပြန်ပြောပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Mr. Linux ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Slackware: D. ငါကြိုးစားမယ်
Firefox 7? ဘုရားမိခင်!
pointer ကို Firefox အမှတ်အသားပေါ်တွင်တင်သောအခါကျွန်ုပ်သည် Firefox7ကိုအသုံးပြုနေကြောင်းအမြဲတမ်းပြသသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်မသိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ် Firefox 17 ကိုအသုံးပြုနေသည်။ Slackware သည်၎င်း၏ပရိုဂရမ်များကိုထည့်သွင်းရန်ရှေးရိုးစွဲစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိသော်လည်းသိပ်မများလှပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မွမ်းမံလိုသည်။
Slackware နှင့် Debian နှစ်ခုစလုံးသည်ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိရှေးအကျဆုံး Linux distros များတွင်အကြီးမားဆုံးသော hitters များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နှစ်မျိုးလုံးသည်ကောင်းမွန်သော distro တစ်ခုကိုနှစ်သက်သောသူများအားလုံးလုံးနှစ်သက်သည် (ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်အနည်းငယ်ခက်ခဲသော်လည်းအချို့သောထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်)
ငါကြိုးစားမယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါက ၇ ဖြစ်သင့်တယ်။ Ubuntu ဟာငါ့ရဲ့ desktop ကိုအေးခဲအောင်လုပ်တယ်၊ ငါ kubuntu ကို install လုပ်တယ်။ အရမ်းသဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း freezes၊ opensuse ကိုငါချစ်မိသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီး၊ ဒီဗွီဒီကကျွန်တော့်ကိုအမှားလုပ်မိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ centos ကို install လုပ်တယ်။ ပြီးရင်ငါ wifi ကို activate လုပ်ပြီးပြီ။ network မှာဖြေရှင်းချက်တွေမရှာဘဲပြtheနာကငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်လက်ပ်တော့ဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး၊ centos7မှာ repositories ကို install လုပ်ဖို့သင်ခန်းစာကိုလည်းရှာနေတယ်။ ဒီအချိန်မှာငါကံကောင်းမယ်၊ ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာကောင်းမယ်၊ ကိုလံဘီယာမှနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုကွန်ယက်ကနေ install လုပ်ဖို့ opensuse ကိုဒေါင်းလုပ်ချန်ထားပါ။
CentOS ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ကြည့်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေတရု၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ငါအသေးစိတ်ဖတ်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ centos ကိုပျော်တယ်
ကံမကောင်းစွာပဲငါ system ကို boot နိုင်ဘူး။ ငါ reboot လုပ်တော့ grub အမှားတစ်ခုရတယ်။ ဒါ့အပြင်အခြား distro တစ်ခုကိုထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်း မှလွဲ၍ ငါမပြင်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ယခုငါ Xubuntu အပေါ်ဖြစ်၏။
အဆိုပါ iso မှားယွင်းစွာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် .. 🙂
ငါ MD5 ကိုစစ်ဆေးပြီးလိုက်ဖက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်မှာ UEFI မရှိဘူး ???
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်မယ် ၎င်းကို Kubuntu သို့မဟုတ် Xubuntu work တို့နှင့်သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်
ဒီဗီဒီကိုသုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်စီဒီကိုသုံးရင် desktop နဲ့ပါတဲ့ packets အားလုံးကို internet ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး transfer မှာအမှားတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် :)
Debian7(သို့) ၆ လုံးသည် identi disk ပါသည့် pentium အဟောင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Grub ကိုစတင်ပါ၊ disk ကိုမတွေ့ပါ။ lilo ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အဲဒါကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်သည့်တပ်ဆင်မှုအဆုံးပိုင်းတွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Grub အမွေသည်အလုပ်လုပ်သော်လည်းပထမ ဦး စွာသင် pc ကို rescatux သို့မဟုတ် SuperGrubDisk ဖြင့် boot လုပ်ပြီးထည့်သွင်းရပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်မှာ VIA chipset ပါတဲ့ပထမမျိုးဆက် Mainboard PC Chips တွေ၊ ၁.၈ Ghz Pentium4နဲ့ RAM 1.8 GB၊ ဗီဒီယို 1 MB၊ hard drive ၂၀ 32 GB နှစ်ခုရှိတယ်။ IDE ရောငါ Debian Squeeze ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်။
ငါ Debian Wheezy DVD1 ISO ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နေပါတယ်၊ ဒါကြောင့် GNOME4ကိုကျဆင်းသွားစေရန် Lentium 3.4 တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Errata ကိုဖတ်ပါ၊ ထိုတွင်သင်သည် installation ပြသနာအချို့ကိုသင်မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုဖော်ပြထားသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲမနေ့ကကျွန်တော့်လက်ပ်တော့ပ်ပဲရှိတော့ SuperGrubDisk ကိုရဖို့လမ်းမရှိတော့ဘူး။ သို့သော်သင်ခန်းစာမှာအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ဒီအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကကျွန်တော့်ကို Debian ကို install လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။
သင်ကြိုဆိုသောသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ post ကမင်းကိုကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်
တစ်ချိန်ကစမ်းကြည့်ဖူးတယ်၊ ဒီ distro ကိုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကဗားရှင်း ၆ လို့ငါထင်တယ်၊ ငါ graphical installer နဲ့ XFCE နဲ့ install လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် Broadcom BCRM6XX ဘုတ်ကိုရဖို့ package တွေကို install မလုပ်နိုင်ဘူး။ အလုပ်များခြင်းနှင့်ထိပ်ဆုံးသို့ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင် package များကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်အိမ်၌ Ethernet cable မရှိပါ။ ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့စုဆောင်းခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ သို့သော်ယခုတွင်ငါသည် Ubuntu နှင့်ချိတ်ဆက်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ' အရမ်းကြိုက်တယ်။
သင် Debian DVD # 1 ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်မလားကြည့်ပါ။
ဒီဗီဒီတွင်မှီခိုမှုအားလုံးပါ ၀ င်သောကြောင့်ပြနာဖြေရှင်းခဲ့သည် :)
အောက်ပါ link ကိုမှာ
သီအိုရီအရ wifi အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်မပြုသင့်သော non-free drivers နှင့် firmware တို့ပါဝင်သည့် debian wheezy live ၏ပုံကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါဒီကို install လုပ်ခဲ့ပေမယ့် XFCE နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်၊ အရမ်းမြန်တယ်၊ တည်ငြိမ်တယ်။ ယခုငါကစိတ်ကြိုက်ရလိမ့်မယ်😀
Debian kde ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပြီးပါပြီ။
Debian7+ KDE = အကောင်းဆုံး😀
အရမ်းကောင်းတယ် atirculo !! အကြံပေးချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ၌ Custom LXDE ဖြင့် Debian Squeeze ရှိသော်လည်းငါ့ desktop ကိုတည်ဆောက်ရန် wheezy ဖြင့်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နေသည်။
ပထမဆုံးတွေ့ရှိရသည့်ပြproblemsနာများမှာကျွန်ုပ် bxier gcaltool အနေဖြင့်အသုံးပြုသော gnome applications များသည်ကျွန်ုပ်၏ lxde environment အတွင်း gtk theme ကိုယူခြင်းမဟုတ်ပါ။ gtk3 themes များတပ်ဆင်ပြီး၎င်းကိုရုပ်ဆိုးပုံမပေါ်စေရန်၎င်းတို့ကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒါပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပြbigနာကြီးကတော့ pcmanfm မှာမကောင်းတဲ့ bug တွေရှိတယ်။ ဥပမာ pinun drives တွေရဲ့ directory ကို fat format နဲ့မပြောင်းပေးဘူး။ thunar ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
ငါ xfce, lxde နှင့် gnome တို့နှင့်အတူကွဲပြားသော hybrid desktop ကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုထင်သည်။ ငါ gnome 2.3x အတွက်လွမ်းဆွတ်မှုတွေအများကြီးခံစားလာရပြီ၊ ဒါကအတိတ်ကအရာအားလုံးကပိုကောင်းတယ်လို့ငါတို့ပြောနိုင်တယ်
Multiarch DVD ဗားရှင်းကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလုပ်ချခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ရွေးချယ်စေကာမူ၊ gnome ကကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ method: tab key ကို dvd boot ၌သုံးပြီးလိုင်းအဆုံးတွင် desktop = kde သို့မဟုတ်အခြား desktop: desktop = fxce သို့မဟုတ် desktop = lxde ကိုထည့်ပါကပြproblemနာမရှိပါ။ 🙂
ကျနော်တို့လမ်းညွှန် compa တန်ဖိုးထား! ..
ယခုအချိန်တွင်ငါ Drivers နှင့် PPAs အတွက် Ubuntu version အသစ်ကိုကြည့်မည်။ Unity နှင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းသည်ကိုကြည့်ကြလိမ့်မည်!
မင်္ဂလာပါ "RedHatero"! ကျွန်ုပ်၏ Lenovo လက်ပ်တော့တွင်မည်သို့ပြုမူမည်နည်း။ Debian သည်စွမ်းအင်နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မသိပါလား။
ဒါကဒါပဲ၊ ဒါ ၁၀ ခုအလုပ်လုပ်တယ်။
ပြီးပြီ၊ ငါကဖယ်ရှားပြီးသားပါ၊ အလွန်ကြီးမားသောအနံ့ဆိုးများ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်များစွာရှိသည်။ ငါ (အနည်းဆုံးယခုအချိန်အထိ) Fedora မှထွက်ခွာလာပြီး Ubuntu ကိုစတင်သုံးသောကြောင့်အနည်းငယ်ပျင်းရိနေသည်။ SO သည်ပြင်းထန်သောကြောင့် Centos ကဲ့သို့ကျောက်ဆောင်ကဲ့သို့ Debian အသုံးပြုသူများကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။
ကောင်းပြီကျွန်ုပ်၏လမ်းညွှန်သည် KDE ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်တိုတောင်းပါက
@petercheco ဒီလမ်းညွှန်အကြောင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့အပြင်ငါမသိသော pendrive မှ DVD 1 ၏ installation method ကို အသုံးပြု၍ Gnome နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည် unetbootin မှပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်သည် -
၁) unetbootin ကို run ပါ။ အရေးကြီး: အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပါ။
၂။ အထက်တွင်၊ ဤကိစ္စတွင် Debian ဖြစ်မည့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုရွေးချယ်သည်။
၃။ ညာဘက်ရှိ drop-down တွင် Stable_HdMedia (အကယ်၍ ၃၂ ဖြစ်ပါက) သို့မဟုတ် ၆၄ ဖြစ်ပါက Stable HdMedia_3 ကိုရွေးချယ်ပါ။
၄။ အောက်ခြေတွင် USB Drive ကိုရွေး။ Drive ဘေးရှိကိုရွေးပါ။ ထိုအခါအိုကေ။
၅။ မိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပါ။ unetbootin သည်အချို့သောဖိုင်များကို pendrive သို့ download လုပ်လိမ့်မည်။
၆။ ပြီးတာနဲ့ unetbootin ကိုပိတ်ပြီး .iso DVD6မှ pendrive သို့ကူးယူပါ။
၇။ System ကို Pendrive မှ Avanti မှ Restart လုပ်ပါ။ သင်ဟာ super graphical installer တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိနိုင်ပါတယ်။
ဟေ့အခုမှတ်မိပြီ .. မင်းဘာကြောင့် Fedora ကိုစွန့်ပြီး Kubuntu ကိုပြောင်းခဲ့တာလဲ။
ငါ Debian Wheezy ကို KDE နှင့်အသုံးပြုနေပါတယ်။ အမှန်တကယ်တည်ငြိမ်မှုကိုလိုအပ်တဲ့အခါ Centro 6.4 ကို Elrepo kernel repository activated နှင့် kernel-lt ကိုဆာဗာများမှာရှိတဲ့ hardware အသစ် (ယခု kernel 3.0.77) သို့မဟုတ် install လုပ်ထားတဲ့ kernel-ml နဲ့လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စားပွဲခုံများသို့မဟုတ်လက်ပ်တော့များ၌အမြဲတမ်းလတ်ဆတ်သော kernel (ယခု 3.9.1 အတွက်ဖြစ်သည်။ )
@petercheco ငါ Kubuntu ကိုမသုံးဘူး၊ ၎င်းသည် Ubuntu 13.04 ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကစနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်စမ်းသပ်နေသည်။ Centos I တွင် SD card Reader နှင့်ပြproblemsနာများရှိခဲ့သည်။ bah၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာ၏ပျင်းရိမှုအဆင့်တွင်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် Ubuntu 13.04 သည်မည်သည့်အရာမျှမထိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Centos 7. Fedora ကိုစောင့်နေတာလား။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အမျိုးသမီးဟောင်းနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်သူမကိုအမြဲတမ်းလာရောက်လည်ပတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူမကိုမည်မျှချစ်ကြောင်းအမြဲသတိရနေသည်။
RHEL ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Wheezy :) နဲ့အတူပြေးနေပြီးကတည်းက CentOS7ကိုလည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Ubuntu သည်ဆာဗာများပေါ်တွင်အားကောင်းနေသည်။
@petercheco Debian ၏ Stable ဌာနခွဲမှဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာသောအခါ RTM တွင်နောက်ဆုံးမိနစ်အမှားများအမြဲရှိနေသည်။ အနည်းဆုံးသူတို့သည်နောက်ဆုံးမိနစ်အမှားများကိုပြုပြင်ခဲ့ကြသောကြောင့် (update 1 မှနောက်ပိုင်းတွင်၊ တည်ငြိမ်မှုသည် CentOS ၏တူညီသော (သို့) ပိုမိုကောင်းမွန်သော) update ကို2သို့မဟုတ်3မှစတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မေးခွန်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းနေရာမဟုတ်ကြောင်းသိသော်လည်းအခြားအဖြေများကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် netbook ၏ debian7နှင့်စတင်ပြသနာရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် ထပ်မံ၍ တိုးချဲ့ရန်မလိုချင်ပါ။ irc သည်ကျွန်ုပ်အားဖြေဆိုပါက irc သည်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုနည်းပါးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကောင်းပြီ၊ သင်ပြtheနာအကြောင်းအထူးမပြောပါ။ သင်ကအခြားအရာတစ်ခုခုပြောပါကသင့်အားသင်ကူညီလိမ့်မည်🙂
ငါဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီ DVD ကိုပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးမှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ချဲ့ကားပြောတာမဟုတ်လား။ (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘဲကွန်ပြူတာတွင်ပင်မည်သူအသုံးပြုသည်ကို Net install ပန်ကာကပြောဆိုသည်။ 😀)
သတင်းအချက်အလက်ကောင်းတယ်၊ အထူးသဖြင့် Debian မှာအမြဲတမ်းနည်းနေတဲ့ repositories ခေါင်းစဉ်။
Debian DVD1 ဗားရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကူးတစ်ခုအတွက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့တွင် Ubuntu နှင့်ဆင်တူသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်စင်တာများနှင့် FileZilla နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သော optional applications များရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၌ရှိသည် သင်၏ဘဝကိုစိတ်ဆင်းရဲစေသည့်အင်တာနက်အမြန်နှုန်း (ဥပမာ 512 Kbps) ။ သင်၏တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသည်၎င်းကို torrent မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်သည်။
1 Mbps အထက်အမြန်နှုန်းအတွက် CD1 သို့မဟုတ် Netinstall ကိုသာဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသဖြင့်အချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှုမှာထိုကဲ့သို့သောအော့ဖ်လိုင်းရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင်များစွာမှီခိုစရာမလိုပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဗီဒီတွေရှိရင်၊ အဲဒါဟာတစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်တယ်၊ အထူးသဖြင့်အနိမ့်မြန်နှုန်း (သို့) အော့ဖ်လိုင်းမှာတကယ်အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာငါမငြင်းဘူး။ ၈ ယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့မိပါ။
သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အနေဖြင့် DVD1 အပြည့်အစုံကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲလျှင်ပင်အခြားအရေးကြီးသောပရိုဂရမ်များတွင်မှီခိုမှုများနှင့်အတူပြproblemsနာများရှိနိုင်သလားသို့မဟုတ်ထို DVD ဖြင့်သာယင်းတို့ကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်ပြီလား။ (ဒီဗီဒီယူလာတဲ့ဘရောင်ဇာလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေအကြောင်းပြောနေတာပါ)
ထိုကဲ့သို့သော Iceweasel 1 ESR၊ မေးလ်ဖောက်သည်များ၊ LibreOffice 10 ရုံးသုံး suite ကဲ့သို့သောဘရောက်ဆာများနှင့်သင် GNOME တွင်ရှိပါကသင့်တွင်ဆော့ဝဲလ်စင်တာတစ်ခုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် browser များကဲ့သို့ application များနှင့်ပြproblemsနာမရှိပါ။ ၅ ။ ဗားရှင်း (Cannonical နှင့်ပူးပေါင်းပြီး KDE, XFCE နှင့် LXDE ကဲ့သို့သောအခြားစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများတွင်အံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုလုပ်သည်) ။
ထို့အပြင် DVD1 တွင် GNOME 3.4 ကဲ့သို့သော desktop မျက်နှာပြင်အပြည့်အစုံရှိပြီး၊ GNOME, KDE ရှိသည့်အခြား CD / DVD များကိုကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ။ (Debian သည် Ubuntu မဟုတ်) အခြားအရာများဖြစ်သည့် VLC, Amarok (KDE အတွက်) ကဲ့သို့သောအခြားအပိုသုံးဆောင်မှုတစ်ခုထက်ပိုသည်။
izzyvp ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့ငါနေတဲ့နေရာမှာငါမှာ 512 kbps ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။ တစ်ခုခုကြီးကြီးမားမားရချင်ရင်၊ အဲဒီမှာ 1000 Mbps connection ရှိတဲ့ uni ကနေပိုကောင်းအောင် download လုပ်လိမ့်မယ်။
ဟယ်လို! နွေးထွေးသောနှုတ်ခွန်းဆက်စကားလက်ခံရရှိသည်။ နောက်ဆုံးတော့တစ် ဦး တည်ငြိမ်သော Wheezy! သတင်းကောင်းပါတကား! ငါ Debian နဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခဲ့ဘူး၊ မကြာခဏငါ system ကို scratch ကနေ install လုပ်တယ်၊ ခဏအကြာမှာငါထပ်ပြီးထပ်လုပ်တော့မယ်! ကျွန်ုပ်သည် DVD ဗားရှင်းကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ desktop1 ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သော package များကိုယူဆောင်လာသည့် DVD1 တစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် "advaced option" ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်လိုပါကအခြား desktop environment တစ်ခု install လုပ်ရန် option တစ်ခုဖြစ်သည် (ငါထင်) အမြဲရှိသည်။ kde, lxde or xfce, ဒီရွေးစရာကိုငါမကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ netinstall iso အတွက်လည်းရရှိနိုင်တယ်။ သင် repository သို့မဟုတ် mirror ကို package များရရှိနိုင်သည့်နေရာမှသာရွေးရမည်။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ "base system" ကိုသာတပ်ဆင်ပြီးပြန်လည် reboot လုပ်ပြီး console မှ Debian "programs" ကို kde task သို့မဟုတ် debian task အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရရှိနိုင်သော repositories တွင်, နောက်ဆုံးတွင် xdg-users packages များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည် directory / home / » username »တွင်ဖိုလ်ဒါများဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်သူများ၊ ထည့်သွင်းထားသော menu-xdg package ကိုဖယ်ရှားခြင်းအပြင်၊ အခြားသူများအကြားဒေါင်းလုပ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ပုံရိပ်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် kde launcher တွင်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်2ကြိမ်ပြသ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! ရွှင်လန်း!
Andres daza ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ… cd ကို xfce ဖြင့် download လုပ်ပါ။ ဒီလမ်းညွှန်သည် kde အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်က terminal ထဲ၌ကျွန်ုပ်ကူးယူထားသောအရာများအားကျွန်ုပ်၏ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
andres daza သို့ပြန်သွားရန်
repositories နှင့် system ၏ update ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
apt-get ကိုထည့်သွင်းပါ iceweasel iceweasel-l10n-my-es icedtea-plugin flashplayer-mozilla vlc icedove icedove-l10n-my-es ဂေါ်ဖီစတိုင် brazier k3b kde-l10n-es rar zip unzip unrar p7zip devede libreoffice libreoffice libreoffice libreoffice l10n gimp gdebi gcalctool ကွန်ယက် - မန်နေဂျာ - gnome
ဤအရာဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ debian xfce သည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ekipo သည်အိမ်တွင်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုငါမသုံးသောအရာများနှင့်မဖြည့်လိုပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် debian7ကို install လုပ်ပြီးပါကမူလ GNOME desktop ကိုမထည့်ပါ။ ၎င်းသည်နောက်ခံပေါ်တွင်သာရှိနေပါက၊ ကျွန်ုပ်အား load လုပ်ပါက classic gnome ကိုရွေးချယ်ပါကမည်သို့ပြtheနာဖြစ်မည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကောင်းပြီ၊ ပြyourနာကမင်းရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပေးတယ်။ ဒါက 3d acceleration ကိုခွင့်ပြုတာလား၊ မဟုတ်ဘူးလား .. မဟုတ်ရင် gnome-classic ကိုသာသုံးနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် xfce or lxde environment ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်။
Debian ပေါ်ရှိ Wi-Fi ကိုကျွန်ုပ်မဆက်သွယ်နိုင်သေးပါ။ : S
ငါတစ်ချိန်ကမင်းပြောခဲ့ပြီးပြီ .. broadcom-sta-dkms အထုပ်ကိုတပ်ဆင်ပါ။ သင့်ဝိုင်ဖိုင်ကဒ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။
ထိုအထုပ်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ ကိုယ့် install လုပ်လိုက်တာက firmware-brcm80211 ပါ။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး။
ငါ post ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း repositories ကိုပြုပြင်ပြီးနောက်ဆက်လက်နှင့်:
သင်၏ superuser စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ
apt-get ရှင်းလင်းမှု firmware ကို -brcm80211
broadcom-sta-dkms ကို install လုပ်ရန် apt-get
ပြန်လည်စတင်ပါ၊ သင့်မှာ wifi 🙂ရှိလိမ့်မည်
ကျေးဇူးပါ၊ ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ် ..
E: Broadcom-sta-dkms package ကိုရှာ။ မရပါ
ငါ Debian ကိုစွန့်ခွာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါကငါနဲ့မကိုက်ညီဘူးထင်တယ်။
@ayosinho - ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောင်းပါးထဲမှာ @petercheco ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းသင့်မှာ repositories ထပ်ထည့်လို့မရဘူး။ သူတို့ကိုထည့်ပြီးသင်ထည့်သွင်းလိုက်လျှင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
လူကြီးလူကောင်း, ငါတို့အဘယ်သို့သွားကြသနည်း apt-get install bind9 သို့မဟုတ် aptitude install bind9 နှင့် ooh !!! အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာက Debian အတွက် dns package မဟုတ်ဘူး။ ဒီ distro monster ထဲမှာတစ်ယောက်ယောက်ဝန်ဆောင်မှုကိုစတင် install လုပ်ပြီးပြီလားဆိုတာငါသိချင်တယ်။ မင်းကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်၊ မင်းလိုချင်ရင်အီးမေးလ်ပို့ပေးပါလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ wili920503@gmail.com အကူအညီဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ဤဖတ်ရန်အချိန်ယူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ D.
Debian အတွက်အသစ် ဟုသူကပြောသည်
Wifi adapter ကိုဘယ်လိုယူမလဲ။ TL-WN321G usb ။ Arch ထဲမှာ rt2500usb module ကို load လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ထားတယ်။
New ကို Debian သို့ပြန်ပြောပါ
(သင်၏ root စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ)
apt-get install firmware -alalink
reboot နှင့်ပြproblemနာ sol ဖြေရှင်း
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာအင်တာနက်မရှိပါဘူး ငါကသာ windows မှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်မကောင်းပေမယ့်ငါအင်တာနက်ကြိုးမဲ့မ ရယ်စရာကောင်းပေမယ့် ArchLinux နဲ့ Gentoo မှာတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ Ubuntu မှာပြောစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအထုပ်ကို၎င်း၊ ၎င်း၏မှီခိုမှုများနှင့်မှီခိုမှုအပေါ်မှီခိုမှုအားလုံးကို download လုပ်သင့်သည်။ : p ကြီးတွေ debian ။
ငါသည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမမှတ်ချက်များကိုမဖျက်ခဲ့ပါဘူး .. အဆိုပါ desdelinux.net ပေါ်တယ်မကြာသေးမီကမှတ်ချက်များနှင့်အတူပြproblemsနာများရှိခဲ့ပေမယ့်ရဲ့ရကြကုန်အံ့ ..
၁ ° Debian DVD1 ကိုကူးယူပြီး cd / dvd ၏ repository ကိုသင်၏ active source.list (စာရင်းသွင်း) တွင်ထားခဲ့ပါ။
2 °သင်၏ wifi အတွက် package ကို download လုပ်ပါ။ ထည့်သွင်းပါ။ မှီခိုမှုများကို DVD မှယူပါမည်။
ဒီမှာ Installation နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြproblemနာတစ်ခုမေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကမေးခွန်းကိုဖျက်လိုက်တယ်။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကဘယ်သူလဲဆိုတာသိဖို့ကောင်းတယ်။ လေးစားပါတယ်
အကယ်၍ သင်သည်မေးခွန်းကို ထပ်မံ၍ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံပေးပို့နိုင်လျှင် - petercheco@hotmail.es
startup တွင် "စောင့်ဆိုင်းခြင်း / dev ကိုအပြည့်အဝလူကြိုက်များခြင်း" ၏အသုံးအနှုန်းကဘာလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ installation အတွက် graphical interface ပါသည့် amd64 ddd ပုံသည်အဘယ်နည်း။
DVD အားလုံးတွင် graphical installation interface နှင့်ဘာသာစကားများအပါအ ၀ င် desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးရှိသည်
အလေးချိန် ၁၂ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ .. Installation ရှိ graphical interface ဖြင့် download လုပ်ရန် image link သို့မဟုတ် torrent ကိုပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ Live ပုံများနှင့်ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်းပုံပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဆုံးမှာတော့အတူတူပါပဲ။
ဒီပုံတွေမှာ Graphic Installer ရှိပြီးသား၊ "Graphical Install" ကိုသာရွေးလိုက်ပါ။
hello petercheco ဒီမှာငါ centos မှ debian7သို့သွားခဲ့သည်။ ငါ debian နှင့်၎င်း၏ repositories ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ် wifi သည်ကျွန်ုပ်ကဒ်ဖြစ်ပါသည်။ root @ debian: / home / euclides # lspci
00: 00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM / PM / GMS, 943 / 940GML နှင့် 945GT Express Memory Controller Hub (တည်းဖြတ် 03)
00: 02.0 VGA သဟဇာတဖြစ်သော Controller: Intel Corporation Mobile 945GM / GMS, 943 / 940GML Express Integrated Graphics Controller (Rev 03)
00: 02.1 ပြသထားသော Controller: Intel Corporation Mobile 945GM / GMS / GME၊ 943 / 940GML Express Integrated Graphics Controller (Rev 03)
00: 1b.0 အသံထုတ်ကုန်: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစုအဆင့်မြင့်အသံထိန်းချုပ်စက် (တည်းဖြတ် 01)
00: 1c.0 PCI တံတား: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု PCI Express Port 1 (တည်းဖြတ် 01)
00: 1c.1 PCI တံတား: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု PCI Express Port2(တည်းဖြတ် 01)
00: 1c.2 PCI တံတား: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု PCI Express Port3(တည်းဖြတ် 01)
00: 1d.0 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု USB UHCI Controller # ၁ (တည်းဖြတ် 1)
00: 1d.1 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု USB UHCI Controller # ၁ (တည်းဖြတ် 2)
00: 1d.2 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု USB UHCI Controller # ၁ (တည်းဖြတ် 3)
00: 1d.3 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု USB UHCI Controller # ၁ (တည်းဖြတ် 4)
00: 1d.7 USB Controller: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု USB2 EHCI Controller (တည်းဖြတ် 01)
00: 1e.0 PCI တံတား: Intel Corporation 82801 မိုဘိုင်း PCI Bridge (rev e1)
00: 1f.0 ISA တံတား: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 01)
00: 1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (တည်းဖြတ် 01)
00: 1f.2 SATA Controller: Intel Corporation 82801GBM / GHM (ICH7-M မိသားစု) SATA Controller [AHCI mode] (တည်းဖြတ် 01)
00: 1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10 / ICH7 မိသားစု SMBus Controller (တည်းဖြတ် 01)
06: 00.0 ကွန်ရက်ထိန်းချုပ်သူ: Broadcom Corporation BCM4311 802.11b / g WLAN (တည်းဖြတ် 01)
08: 08.0 Ethernet Controller: Intel Corporation PRO / 100 VE ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု (Rev 01)
root @ debian: / home / euclides # သည်အထက်ပါမှတ်ချက်များတွင်သင်အကြံပြုထားသော package အချို့ကို download လုပ်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ wifi ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါကဤ debian သည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ ဝိုင်ဖိုင်၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ရပ်ရွာကိုသင်ပေးအပ်သည့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မင်္ဂလာပါ cractoh :),
သင် packages များ download လုပ်လျှင်:
သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည် open terminal ဖြစ်ပြီးရိုက်ပါ။
ယုတ္တိနည်းအရ၊ သင်သည်ကေဘယ်လ်အင်တာနက်ရှိပါက၊ ဤအစုများကို download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုချိတ်ဆက်ထားသောအင်တာနက်ဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
apt-get update && apt-get -y ကို install လုပ်ရန် broadcom-sta-dkms
ထို့နောက် PC ကို restart လုပ်ပါ။
hello petercheco, ငါကအပေါ်ကခြေလှမ်းတွေအားလုံးရှိတယ်။ repos အားလုံးကို update လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါချိတ်ဆက်ထားတာကဘာမှမလုပ်ပေမဲ့ဖိုင်ကိုရှာမတွေ့ဘူး၊ မနက်ဖြန်နောက်ကျသွားပြီ၊ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး cd / home / euclides / downloads dpkg- idkms_2.2.3-1.2_all.deb dpkg-ibroadcom-sta-dkms_5.100.82.112-8_all.deb
ကြည့်ရအောင်၊ သင်ဘာလုပ်ရမည် terminal ကိုဖွင့်ပြီးရေးပါ
သင့်အိမ်တွင် downloads folder မရှိပါကဖိုင်မန်နေဂျာကိုဖွင့်နိုင်သည်။ package များဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောနေရာကိုသွားပြီး mouse ၏ညာဘက်ခလုပ်ကို နှိပ်၍ "open terminal here" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထိုအခါ voila 🙂
ဟဲလိုပီတာကိုကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သည်။ ယခုငါချိုးထားသောဖိုင်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြသည်။ ၎င်းကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးပြန်လာသည်။
(gksudo: 3692): GConf-WARNING **: သုံးစွဲသူသည် D-BUS daemon နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပျက်ကွက်သည်။
ပြန်စာမရခဲ့ပါဘူး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်းများတွင် - ဝေးလံခေါင်သီသော application သည်တုန့်ပြန်မှုမပို့ခဲ့ပါ၊ message bus လုံခြုံရေးမူဝါဒသည်တုန့်ပြန်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်း၊ reply timeout သက်တမ်းကုန်သွားခြင်းသို့မဟုတ် network connection ပြတ်တောက်ခြင်း။
GConf မအောင်မြင်ပါ။ D-Bus daemon အလုပ်မလုပ်ပါ
ကြည့်ရှုပါ။ Gnome install gdebi ကိုအသုံးပြုသည်။ debian dvd တွင်သို့မဟုတ်၎င်းမှကူးယူပြီးပါက
gdebi ကို Install လုပ်ပါ။
ဤအစုများထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် .deb package installation ကိုနှစ်ချက် နှိပ်၍ သို့မဟုတ်ညာဘက်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ gdebi ဖြင့်ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ PeterCheco၊ ခင်ဗျားဘယ်လိုလဲ။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူသစ်တွေကိုသင်ပေးတဲ့အလှူအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Debian KDE ကို CD ထဲမှ Server တစ်ခုပေါ်မှာတပ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ကွန်ယက်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါဘူး ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အသံနှင့်၎င်းကို DVD နှင့်ထည့်သောအခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုပါက၊ ကျွန်ုပ်သည် (ကျွန်ုပ်၏ PC တွင် Kubuntu ကိုသုံးပါသည်) ကျွန်ုပ်သည် KDE ကိုနှစ်သက်သည်။ သင်၏ဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်မဖတ်ပါကမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုမသိပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့အဲဒါကိုအခု install လုပ်နေတယ်၊ ​​တပ်ဆင်မှုပြီးတဲ့အခါမှာအဆုံးအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အဲဒီမှာရှိမလားမသိဘူးတစ်ခုခုကိုမေးချင်ပါတယ်။ CentOS မှာတွေ့ပြီ၊ LINUX နှင့် Windows ရှိ PCs များကို Backup လုပ်ရန် Debian နှင့်အတူဒီဆာဗာတွင် Bacula ကိုတပ်ဆင်၊ ပြုပြင်၊ သုံးလိုသည်၊ LINUX နှင့် Windows နှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် backup အတွက်ပရိုဂရမ်အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်တွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် installation ဗွီဒီယိုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ Server CentOS အတွက်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသူငယ်ချင်းတစ် ဦး သည်ရှာတွေ့ခဲ့ပါသည် Debian အတွက်သူတို့တည်ရှိခဲ့ရင်ရှာဖွေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုငါရှာလိုက်တယ်။ Debian KDE environment ကိုဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်၊ သင်သိလားဆိုတာသိချင်လို့ပါ။ Debian နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားသိတယ်ဆိုတာကိုငါသိကတည်းကငါမသိရပါဘူး ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားကိုကူညီနိုင်မှာပါ၊
ကြိုတင်၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင့်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်ပြီးသင်၏နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများတွင်အောင်မြင်ပါစေ ...
Bacula package ကို Debian တွင်ရနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သော installation လမ်းညွှန်ကိုဤနေရာတွင်ရနိုင်သည်။
ယုတ္တိနည်းအရ mysql: D. ကိုထည့်သွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။
ပြီးနောက် configuration သည် CentOS ကဲ့သို့တူညီသည်: D.
OK ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုတောင်းခံရန်ငါမတွန့်ဆုတ်ဘဲအခြားမေးခွန်းများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များသည်သင်၏အကူအညီကိုလက်ခံရန်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ပါတယ် ... ဂရုစိုက်ပါ
ဟေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဖတ်တာ၊ install လုပ်တာ၊ စမ်းသပ်တာစတာကိုကြည့်ပြီးဂရုစိုက်ပါ
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Xfce (သို့) LXDE light desktops တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်၊ ဘယ်ပုံကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမှန်းမသိဘူး၊ Debian7နဲ့ပတ်သက်ပြီး Gimp ကနောက်ဆုံးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပေမယ့်သူတို့ထွက်ပေါ်လာမယ့်4ကိုကြေငြာပြီးရင် LibreOffice 4.1 နဲ့ဘာကြောင့်မလာတာလဲ။
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ LXDE ထက် XFCE ကိုအသုံးပြုလိုသည်။ Libreoffice ကိုတရားဝင်စာမျက်နှာမှ .deb format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သည်။ ရိုးရိုး dpkg -i libreoffice * ကိုဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲရှိ terminal ထဲတွင်တည်ရှိသည်။ ဥပမာ cd / home / your_user_name / Downloads
Petercheco အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LXDE ကိုမေ့သွားတယ်။ Xfce ကဆက်ပြီး update လုပ်တယ်။ ဒီမှာဖတ်ခဲ့တဲ့အရာကတိုးတက်မှုကောင်းတယ်။ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ apt-get ကိုအမြဲတမ်းသုံးခဲ့သော်လည်းသင်ပြောသည့်အတိုင်းကြိုးစားလိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်ဆုံး LibreOffice သည် repositories တွင်မရှိသောကြောင့်ဖြေရှင်းချက်သည် .deb ကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိမ်ထောင်ဖက်!
ငါရှာနေတာမတွေ့ရဘူး။ 64-bit Gnome desktop က AMD အတွက်ဘာကြောင့်လာတာလဲ။ အားလုံးဖြန့်ဝေများအတွက်တူညီသည်။
အတူတူပါပဲ: D. amd64 ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ။
လူအများစုဖတ်ကြရအောင် - သုံးစွဲမှု Linux: April 2013
Firefox OS Simulator3ရရှိနိုင်ပါ